The World of Moe Thanzin: အဖွားတို့အိမ်
ရေးသူ မြူးမြူး at 9:35 AM
After I had read your post, I miss my grand father's house also. I also want to go back on CNY, Tha dinn kyaut, Thingyan, etc. My grand father have 38 grand children and more than 10 great grand children. I miss all of my cousins. Most of the events are similar to the events in your post. :(
my office computer can't type mm font.
ပျော်စရာကြီးနေမှာနော်။ မြူးမြူးဆို တော်သေးတယ်
၄နှစ်ပဲ ကိုယ်ဆို ၁၃နှစ်ရှိပြီ။ အဖွားလည်း ဆုံးသွားရှာပြီ
အဘွားတို့ အိမ်လေးကို သဘောကျလိုက်တာ...မောင်နှမတတွေလဲ ပျော်စရာကြီးပဲး))
တစ်ခါတစ်လေ ရွာသွားလည်ရင်တောင် မရင်းနှီးတော့ဘူးရယ်.
ko dote twae grandmom home ne tu lite tar,,, khu soaphwar sone tar 8 years louk shi b....
cousin twae lal ma twaet phyit tot woo....
သင်္ကြန်ထမင်းတောင် စားချင်လိုက်မိပါ၏။ ညီမ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားက မြေးမြစ်တွေ အများကြီးနော် ပျော်စရာကြီးနေမှာ။